Yeson - Curie ခြံစည်းရိုး, 358 လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး, Chain Link ကိုခြံစည်းရိုးကို 3D
3D Curie ခြံစည်းရိုး
China- Anping ၏ကျော်ကြားဝါယာကြိုးကွက်မြို့မှာတည်ရှိပါတယ် Yeson Anping ။ ကျနော်တို့ရှေ့ဦးစွာ မှစ. အရည်အသွေးမြင့်မားဝါယာကြိုးကွက်ထုတ်လုပ်မှုစုပ်ယူပြီ။ အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူကျနော်တို့အများကြီးပိုအားကောင်းဖြစ်လာ, ကြှနျုပျတို့ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များအတွက်အများအပြားအခက်အလက်တို့ကိုခန့်ထားပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်: welded ဝါယာကြိုး mesh, panel ကို mesh welded အားဖြည့်, panel ကို mesh welded, mesh တိုးချဲ့, စတုရန်းဝါယာကြိုး mesh, ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးလူမီနီယံဝါယာကြိုးခွငျထော, သံမဏိဝါယာကြိုး mesh, သံဝါယာကြိုး, barbed ဝါယာကြိုး, ကွင်းဆက် link ကိုခြံစည်းရိုး, gabion mesh, mesh, နှင့်သင်တုန်းဝါယာကြိုးစသည်တို့ .. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အမေရိကန်နိုင်ငံ, အီတလီ, ရုရှား, သြစတြေးလျ, အလယ်အလတ်အရှေ့, အာဖရိကနှင့်အရှေ့တောင်အာရှတင်ပို့ခဲ့ကြသည်။
ကျော်ကို 10 ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
သန်း 100 ကျော်
20 + ထုတ်ကုန်တစ်ခုမှာ-stop စျေးဝယ်
ကွင်းဆက် link ကို
PVC ကွင်းဆက် link ကိုခြံစည်းရိုး
ကွင်းဆက် link ကိုခြံစည်းရိုးအနက်ရောင်
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးကွင်းဆက် link ကိုခြံစည်းရိုး
Xutuan စက်မှုပန်းခြံ, Anping, Hebei, တရုတ်
© Copyright - 2010-2022 : All Rights Reserved. Hot ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း
အပြင်ဘက်ယာယီခြံစည်းရိုး , Palisade ခြံစည်းရိုး, ၈၆၈ နှစ်ထပ်ကြိုး , Chain Link ယာယီခြံစည်းရိုး , 358 လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး, သံမဏိ Palisade ခြံစည်းရိုး,